Anuanom Mmea A Wohuu Amane A ‘Wɔkyekyee Israel Fie’
Ɔwɛn-Aban—Nea Adesua Nsɛm Wom | October 1, 2007
KENKAN WƆ Albanian Arabic Armenian Bicol Bulgarian Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Korean Lithuanian Malagasy Malayalam Myanmar Norwegian Polish Portuguese Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Thai Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese
BERE a ade rekye no, na Lea nim sɛ ɛrenkyɛ na ne ho ada hɔ. Ná Yakob a ɔda ne kokom no behu sɛ sɛɛ ná ɔnyɛ ne nuabea kumaa Rahel a ɔwaree no no. Ɛda adi sɛ, Lea de ntama kataa no ho nyinaa dii kan kɔdaa ayeforo mpa a na wɔato ama Yakob ne Rahel no so anadwo sɛnea ne papa ne no hyehyɛɛ ho no.
Bere a ade kyee na Yakob hui sɛ wɔadaadaa no no, hwɛ sɛnea ɛbɛyɛ sɛ ɛhaw no! Yakob bo fuwii ma ɔne Lea papa Laban hamee. Saa bere no, ɛbɛyɛ sɛ Lea dwennwenee sɛnea ɔno nso boapa yɛɛ ne ho te sɛ Rahel ne nea na ebetumi afi mu aba no ho. Lea ne Rahel asɛm no yɛ Bible mu asɛm a ɛho hia, na ɛma yehu nea enti a mfaso nni aware dodow so, ne nea enti a ɛnsɛ sɛ yefi yɛn aware mu hokafo akyi no nso.
Ɔhɔho Bi a Wohuu no wɔ Abura no Ho
Mfe ason a atwam no, na Rahel atutu mmirika akɔka akyerɛ n’agya sɛ wahu ɔhɔho bi a ɔkyerɛ sɛ ɔyɛ wɔn busuani wɔ abura no ho. Sɛɛ ná ɔhɔho no yɛ Rahel sewaa ba a wɔfrɛ no Yakob no, na na ɔyɛ Yehowa somfo. Ɔsram biako akyi no, Yakob ka kyerɛɛ Laban sɛ ɔmma ɔnsom no mfe asom na ɔmfa Rahel mma no aware. Esiane sɛ Laban hui sɛ ne wɔfase Yakob pɛ adwuma na wɔn amammerɛ nso ma kwan ma wotumi ware wɔn abusuafo nti, ɔpenee nea Yakob kae no so.—Genesis 29:1-19.
Ná ɔdɔ a Yakob wɔ ma Rahel no nnyina honam akɔnnɔ so, na ɛyɛ dɔ kann. Ɛno nti, mfe ason a wɔhyehyɛ too hɔ sɛ wɔbɛware no yɛɛ “n’ani so sɛ nna mfuamfua bi.” (Genesis 29:20) Sɛnea Yakob dɔɔ Rahel kosii sɛ Rahel wui no ma yehu sɛ ɛbɛyɛ sɛ na Rahel wɔ su ahorow pii a na Yakob ani gye ho.
So na Lea nso pɛ sɛ ɔware Yehowa somfo a odi nokware? Ɛno de, Bible nka ho asɛm. Wɔakyerɛkyerɛ adwene a na Laban kura wɔ aware no ho no mu akɔ akyiri wɔ Bible mu. Bere soe sɛ Yakob ware Rahel no, Laban too pon maa wɔn. Nanso, Bible ka sɛ, adesae no, Laban de Lea brɛɛ Yakob ma “ɔkɔɔ ne ho.”—Genesis 29:23.
So Lea ne n’agya na ɛfaa adwene daadaa Yakob? Anaasɛ na ɛsɛ sɛ otie n’agya nti na ɔyɛɛ saa? Ná Rahel wɔ he saa bere no? So na onim nea ɛrekɔ so no? Sɛ na onim a, ɔtee nka dɛn? So na n’agya asɛm yɛ den araa ma enti na ɔrentumi ntwiw mfa no so? Bible mma yɛn saa nsɛmmisa yi ho mmuae. Ɛmfa ho adwene a na Rahel ne Lea wɔ wɔ asɛm yi ho biara no, akyiri yi, ɛpɔw a wɔbɔe no maa Yakob bo fuwii. Na Laban mmom na Yakob ne no hamee, na ɛnyɛ ne mmabea no. Yakob kae sɛ: “Ɛnyɛ Rahel nti na mesom wo? Na ɛdɛn nti na woasisi me yi?” Asɛm bɛn na Laban kae? Ɔkae sɛ: “Wɔmma akumaa nware ansa na wɔde abakan ama. Di ne nkyɛn nnawɔtwe yi, na yɛde oyi nso bɛma wo, ɔsom a wobɛsom me mfe ason bio ho.” (Genesis 29:25-27) Ɛyɛ saa kwan yi so na wɔdaadaa Yakob ma ɔwaree yerenom baanu ma ɛkɔfaa koratwe bɔne baa wɔn abusua mu no.
Abusua Bi a Anigye Nnim
Ná Yakob dɔ Rahel. Enti, bere a Onyankopɔn hui sɛ Yakob ‘tan’ Lea na ɔdɔ Rahel no, ɔmaa Lea woe, na Rahel de, na ɔnwo. Nanso, na ɛnyɛ ɔba nkutoo na na Lea pɛ; na ɔpɛ sɛ Yakob dɔ no nso. Bere a Lea hui sɛ Yakob dɔ Rahel no, ne werɛ howee. Eyi nyinaa akyi no, Lea hwɛɛ kwan sɛ n’abakan Ruben a ne din no ase ne “Monhwɛ babanin” no nti, Yakob bɛdɔ no. Biribi nti na Lea de saa din no too ne ba no. Lea kae sɛ: “[Yehowa, NW] ahwɛ m’amane, na afei de, me kunu bɛdɔ me.” Nanso, Yakob annɔ no; saa ara na ɔbabarima a ɔto so abien a ɔwoo no no nso amma wannɔ no. Lea too saa abofra no din Simeon, a ase ne “Otie.” Lea kae sɛ: “[Yehowa, NW] ate sɛ wɔtan me nti na ɔde oyi nso ama me.”—Genesis 29:30-33.
Ka a Lea kae sɛ Onyankopɔn atie no no kyerɛ sɛ, na wabɔ ne haw no ho mpae. Ɛte sɛ nea na Lea yɛ ɔbea a ɔwɔ gyidi. Nanso, ɔkɔɔ so dii awerɛhow wɔ bere a ɔwoo ne babarima a ɔto so abiɛsa a ɔtoo ne din Lewi no mpo. Lewi din a ase ne “Ɛhofam” anaasɛ “Nkabom” no ma yɛte asɛm a edi hɔ yi a Lea kae no ase. Lea kae sɛ: “Afei ansa na me kunu de ne ho bɛfam me ho, efisɛ me ne no awo mmabarima baasa.” Nanso, ɛda adi sɛ Yakob anka ne ho ankɔ Lea ho. Ɛbɛyɛ sɛ Lea gye toom sɛ Yakob renka ne ho mma ne ho, efisɛ edin a ɔde too ne babarima a ɔto so anan no ma yehu sɛ na ɔnhwɛ kwan sɛ Yakob bɛdɔ no. Mmom no, ne ba no a ɔtoo ne din Yuda no kyerɛ aseda a ɔde maa Onyankopɔn. Efisɛ nea edin Yuda kyerɛ ne “Ayeyi” anaasɛ “Ayeyi ba.” Nea Lea kae ara ne sɛ: “Eyi de meyi [Yehowa, NW] ayɛ.”—Genesis 29:34, 35.
Sɛ Lea dii awerɛhow a, ɛnde yɛbɛka sɛ Rahel ho yeraw no. Rahel srɛɛ Yakob sɛ: “Ma me mma, na anyɛ saa a, mewu.” (Genesis 30:1) Ná Yakob dɔ Rahel, nanso na Rahel pɛ ɔba. Ná Lea wɔ mma, nanso na ɔpɛ sɛ Yakob dɔ no. Ná mmea baanu no nyinaa ani bere nea ne yɔnko wɔ, nanso na wɔn mu biara nni anigye. Ná wɔn baanu nyinaa dɔ Yakob, na na wɔpɛ sɛ wɔne no wo mma. Ná wɔn mu biara ani bere ne yɔnko. Hwɛ sɛnea na abusua no asɛm yɛ awerɛhow fa!
Saa bere no, sɛ obi nwo a, na ɛyɛ ɔhaw. Ná Onyankopɔn ahyɛ Abraham, Isak, ne Yakob bɔ sɛ “aseni” no befi wɔn abusua mu, na wɔnam no so na wobehyira mmusuakuw nyinaa. (Genesis 26:4; 28:14) Nanso, na Rahel nni mma. Yakob kae sɛ Onyankopɔn nkutoo na obetumi ama Rahel awo mma, na watumi aboa ma saa nhyira no abam. Nanso, na Rahel repere ne ho. Rahel ka kyerɛɛ ne kunu sɛ: “Hwɛ, m’afenaa Bilha ni, kɔ ne ho, na ɔnwo ngu me srɛ so, na me nso minnya ne ho mma.”—Genesis 30:2, 3.
Ebia ɛbɛyɛ den ama yɛn sɛ yɛbɛte nea Rahel yɛe no ase. Nanso, wɔ aware ahorow a wɔhyehyɛe wɔ tete mmere mu ho kyerɛwtohɔ bi a wohui wɔ aman a ɛbɛn Mediterranea Supɔw no so mu no, na wɔkyerɛ sɛ sɛ ɔyere bi nwo a, na obetumi de n’afenaa ama ne kunu ma wawo ama no. * (Genesis 16:1-3) Ɛtɔ mmere bi a, na wotumi bu afenaa no mma no sɛ wɔyɛ ɔyere a ɔnwo no mma.
Bere a Bilha woo ɔbabarima no, Rahel de anigye kae sɛ: “Onyankopɔn adi m’asɛm, na watie me nne nso ama me ɔba.” Enti ɔtoo ne din Dan a ase ne, “Ɔsennifo.” Ɛda adi sɛ, ná Rahel nso abɔ ne haw no ho mpae. Bere a Bilha woo ɔbabarima a ɔto so abien a ɔtoo ne din Naftali a ase ne “M’akodi” no, Rahel kae sɛ: “Ako akɛse na me ne me nuabea adi, nso matumi no.” Edin ahorow a wɔde totoo mmofra no ma yehu sɛnea na wɔretwe kora denneennen no.—Genesis 30:5-8.
Ebia Rahel nyaa adwene sɛ Bilha a ɔde no maa Yakob no yɛ mpae a ɔbɔe no ho adwuma na na ɔreyɛ, nanso na ɛnyɛ saa kwan yi na na Onyankopɔn bɛfa so ama no anya mma. Yebetumi asua biribi afi saa asɛm yi mu. Sɛ yɛsrɛ Yehowa hɔ biribi a, ɛnsɛ sɛ yɛpere yɛn ho wɔ ho. Obetumi abua yɛn mpaebɔ wɔ ɔkwan bi a yɛn anni nna so so ne bere a yɛnhwɛ kwan.
Lea nso de n’afenaa Silpa maa Yakob aware, sɛnea ɛbɛyɛ a Rahel rensisi no. Silpa dii kan woo Gad, na akyiri yi, ɔwoo Aser.—Genesis 30:9-13.
Adesãa bi a Lea ba Ruben kɔfa baa fie no ma yehu sɛnea na Rahel ne Lea retwe kora no. Ná nkurɔfo susuw sɛ saa aduaba yi boa ma ɔbea tumi nyinsɛn. Bere a Rahel srɛɛ Lea sɛ ɔmma no adesãa no bi no, Lea kaa asɛm bi de twiw Rahel sɛ: “So ɛnnɔɔso sɛ woafa me kunu, na worebegye me ba adesãa nso anaa?” Ebinom anya adwene sɛ, saa asɛm yi a Lea kae no kyerɛ sɛ na Yakob taa kɔda Rahel nkyɛn sen Lea. Ɛbɛyɛ sɛ Rahel hui sɛ asɛm a Lea kae no yɛ nokware, efisɛ obuaa no sɛ: “Wo ba adesãa no nti ma ɔne wo nkɔda anadwo yi.” Enti, bere a Yakob baa fie anwummere no, Lea ka kyerɛɛ no sɛ: “Bra me nkyɛn, efisɛ ɔtɔ na mede me ba adesãa matɔ wo.”—Genesis 30:15, 16.
Lea woo ne ba a ɔto so anum ne nea ɔto so asia a wɔne Isakar ne Sebulon. Ɛno akyi no, Lea kae sɛ: “Afei de, me kunu ne me bɛtra, efisɛ mawo mmabarima baasia mama no.” *—Genesis 30:17-20.
Adesãa no ammoa Rahel amma no anyinsɛn. Bere a Rahel waree no, mfe asia akyi na onyinsɛn woo Yosef. Na ɛyɛ Yehowa na ‘ɔkaee’ no na obuaa ne mpaebɔ. Ɛyɛ saa bere no na Rahel tumi kae sɛ: “Onyankopɔn ayi m’ahohora.”—Genesis 30:22-24.
Wɔn Wu ne Nea Wogyaw Wɔ Akyi
Rahel wui bere a na ɔrewo ne ba a ɔto so abien a wɔfrɛ no Benyamin no. Ná Yakob dɔ Rahel paa, na na ne mmabarima baanu no nso da ne koma so. Mfe bi akyi, bere a Yakob rebewu no, ɔkaa ne yere a na ɔdɔ no a ɔne Rahel a owui mpofirim no wu ho asɛm. (Genesis 30:1; 35:16-19; 48:7) Lea de, yennim ne wu ho asɛm biara, nea yenim ara ne sɛ Yakob siee no wɔ ɔbodan bi a na ɔpɛ sɛ ɔno nso wu a wosie no wom no mu.—Genesis 49:29-32.
Wɔ Yakob nkwakoraabere mu no, ɔkae sɛ wahu amane wɔ n’asetram ne n’abusua mu nso. (Genesis 47:9) Akyinnye biara nni ho sɛ, Lea ne Rahel nso huu amane saa ara. Lea ne Rahel asɛm no ma yehu ɔhaw a ɛwɔ aware dodow mu, na ɛma yɛte nea enti a Yehowa kae sɛ, ɛsɛ sɛ ɔbarima biara nya ɔyere biako no ase. (Mateo 19:4-8; 1 Timoteo 3:2, 12) Sɛ okunu anaa ɔyere hu sɛ ne hokafo anya obi foforo ho anigye anaasɛ ɔne no da a, ɛde ninkuntwe ba. Ɛno ka ho bi nti na Onyankopɔn bra aguamammɔ ne awaresɛe no.—1 Korintofo 6:18; Hebrifo 13:4.
Sɛnea ɛte biara no, Onyankopɔn de mmarima ne mmea a wɔnyɛ pɛ nanso wodi nokware yɛɛ adwuma, na ɔda so ara de wɔn reyɛ adwuma nnɛ. Ná anuanom mmea baanu no mu biara wɔ mmerɛwyɛ ahorow sɛnea yɛn nso yɛwɔ bi no. Nanso, Yehowa nam saa mmea yi so maa bɔ a ɔhyɛɛ Abraham no fii ase baam. Enti, ɛfata sɛ yɛka sɛ Rahel ne Lea na ‘wɔkyekyee Israel fie.’—Rut 4:11.
^ nky. 15 Aware ho kyerɛwtohɔ no biako a wohui wɔ Nuzi a ɛwɔ Iraq no kenkan sɛ: “Wɔde Kelim-ninu ama Shennima aware. . . . Sɛ Kelim-ninu anwo [mma] a, Kelim-ninu bɛpɛ ɔbea bi [afenaa bi] a ofi Lullu asase so ama Shennima aware no.”
^ nky. 20 Lea mma no mu biako a wɔfrɛ no Dina no nkutoo ne Yakob mmabea no mu nea yenim ne din.—Genesis 30:21; 46:7.
Lea ne Rahel nyinaa ani beree nea ne yɔnko wɔ, na na wɔn mu biara nni anigye
Israel man no fi Yakob mmabarima 12 no mu
Share Share Anuanom Mmea A Wohuu Amane A ‘Wɔkyekyee Israel Fie’
w07 10/1 kr. 8-11
Sodifo Bi a Ɔyɛ Ɔdefo Ansi Gyinae Pa
Nneɛma a Yɛyɛ a Ɛma Yɛn Ani Gye
Yoel ne Amos Nhoma no Mu Nsɛntitiriw
Momma Yɛnyɛ Nneɛma A Mfaso Wɔ So Wɔ Yɛn Asetram
Momma Yɛnyɛ Onyankopɔn Apɛde Nnɛ
Ogye A Yebenya Afi Ofirisumfo No Mfiri Mu
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM October 1, 2007
Share Share ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM October 1, 2007
ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM October 1, 2007